Madaxda Jabuuti iyo Suudaan oo Itoobiya booqasho ku jooga - Halbeeg News
JIMMA (HALBEEG)- Madaxweynayaasha dalalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Suudaan, Cumar Xasan Al-bashiir iyo wufuud ballaaran oo ay hoggaaminayaan ayaa saaka gaaray magaalada Jimmi ee ismaamulka Oromada dalka Itoobiya.
Labada madaweyne ayaa waxaa halkaasi kusoo dhaweeyay ra’isul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed iyo saraakiil ka tirsan dowladda dhexe ee Itoobiya iyo kan ismaamulka Oromada.
Madaxweyne Geelle iyo madaxweyne Al-bashiir oo casuumaad rasmi ku jooga dalka Itoobiya ayaa ka qeybgalaya fantasiye dhaqameedka sanadlaha ah ee qowmiyadaha iyo shuucuubta dalka Itoobiya.
Dalalka Itoobiya, Suudaan iyo Jabuuti ayaa ah dalal uu ka dhexeeyo xiriir ganacsi iyo mid maalgashi.
Sida qorshuhu yahay, madaxwene Geelle iyo ra’iisul-wasaare Abiy Axmed ayaa fursaddaan uga faaiideysan doona in ay ka wada hadlaan xoojinta xiriirka labada dal ee Jabuuti iyo Itoobiya iyo guud ahaan in sare loo qaado xiriirka cusub ee dhawaan ka dhex unkamay dalalka dhaca gobolka Geeska Afrika.
Tan iyo markii uu ra’isul wasaare Abiy Axmed hoggaanka u qabtay dalka Itoobiya ayaa guud ahaan gobolka Geeska Afrika waxaa laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo gunta hoose looga soo tolayo isfahamka dalalka gobolka taasoo saldhig looga dhigayo abuurista dhaqaale wadaag ah oo ay yeeshaan dalalka gobolka si meesha looga saaro dhammaan turun-turrooyinka ku hor gadaamanaa horumarka iyo is dhex galka bulshada Geeska afrika
Garyaqaanka Guud ee Puntland: Camey xaq uma lahan magacaabista guddiga xallinta khilaafaadka